Sisungule iGeo-Injineli-imagazini- iGeofumadas
NgoJuni, 2019 Geospatial - GIS, Zobunjineli, ezintsha
Ngolwaneliseko olukhulu sibhengeza ukumiliselwa kwephephancwadi lobunjineli beGeo kwilizwe leSpanishi. Iya kuba nexesha rhoqo ngekota, ityebise uhlelo lwedijithali lomxholo wemultimedia, ukhuphele kwi-pdf kunye nohlobo oluprintiweyo kwiminyhadala ephambili egutyungelweyo ngabo baphambili kuyo.
Kwinqanaba eliphambili leli phephancwadi, igama elithi Geo-ingunjineli liguqulelwa ngokutsha, njengolu hlobo olubandakanya intambo yexabiso ukusuka ekubanjweni kwedatha ukuqala kokuqala kohlobo lwemveliso.
Kwiphepha layo eliphakathi kukho i-infographic ebonisa ukuvela kwemiqathango ye-GIS, i-CAD, i-BIM ethi kwigalelo labo lembali belikhula kungekuphela kokumiselwa komgangatho kulawulo lolwazi kodwa ikwanomtya oqhelekileyo okhokelela Uyilo kwakhona lweenkqubo zento ebizwa ngokuba yi "sayensi yomhlaba", kuncinci kwaye kuncinci. Ubume be-infographic bufikelela kuloo fusion ye-BIM + PLM kwisakhelo senguquko yesine kwimizi-mveliso ngoku ekhuthazwe ngamagama afanayo anje ngamaDijithali amaDijithali, iiSmartCities ezinesibhakabhaka sokuba endaweni yokubonakala ukude ngokuqinisekileyo ziya kuza ngaphandle kokuyiqonda ngokunjalo yenzekile kumzi mveliso we-Uber-Airbnb.
Elinye lawona manqaku aphambili aqokelela izinto kuLawulo loMhlaba, phakathi kwazo apho icadastre ka-2014 yacebisayo, ethetha ngempumelelo kunye nemiceli mngeni engekagqitywa kweli candelo, iimodeli zazo zokwenyani kwendalo ekufuneka zidibene neemodeli zotshintsho ezibangelwa ukubangumntu. Iimpawu ezinqwenelwa yiCadastre 2034 ukwaziswa kwindlela yayo kumsebenzisi wokugqibela enendima ebonakalayo ekuhlaziyweni nakwiziseko zophuhliso lwedatha kunxibelelwano lwabo namalungelo, uxanduva kunye nezithintelo zomyalelo woluntu phantsi kwendlela yobhaliso. kwaye ayisiyiyo nje ubudlelwane beendawo.
Ngenxa yoko, ngala manqaku amabini aphezulu, amatyala okusetyenziswa ezintlanu afakwe; zintathu zijolise ekutheni imodeli yeenkcukacha eziphambili kunye neendlela ezimbini zenzeke kwi-BIM ukuphucula iinkqubo zoshishino.
Plex.Earth apho Lambros ngeSpanish iguqulelwe yi inqaku Laura García isixelela izisombululo CAD-GIS elingumxube imfuno iinjineli embambano ngokwembono imbali yakhe buqu:
Kwakungekho nto yokukhetha: kufuneka sihlaziywe kwakhona umsebenzi wenyaniso yendawo, echaphazelayo phantse lonke ukufakwa. Silahlekile ngeenxa zonke ezine iinyanga, kodwa iinombolo thina bamangaliswa: kwiprojekthi ye-6 yezigidi iidola, ukuhlaziywa kweendleko ezingaphezulu kwe $ 600.000 ...
Yilapho ndiqala khona phuhlisa ezinye i zixhobo "Kulula" ukuxhuma kwi-AutoCAD I-Google Earth, okwenza ixesha elithile Kwakuyinto yethu-inzuzo yokuzikhuphisana.
e-Cassini, umseki wayo usibonisa kudliwano-ndlebe kunye Shimonti uPawulos, njengoko yokugcina ulwazi ukusuka mphandle Hub ngenzeka njengendlela eyodwa inyaniso.
Igradra yeLiDAR yaziwa namhlanje ngokukodwa ngu abasebenzisi, baninzi ubude ukusuka kwindawo yezobugcisa ngokugxininiswa kakhulu kwi ngombono wobungakanani, ukuchaneka nokuchaneka. Okwangoku Ngoko, imingeni eninzi eyenzekayo ngokuchanekileyo kunye phe leleyo Ngakumbi Chaza ngqo izithuba, ezinkulu inani labasebenzisi kunye ixabiso elongezelelweyo kumzekelo shishini
Umongameli weChashmte uchaza indlela iindlela ze-digital ezenzelwe ngayo imifanekiso ye-satellite zifumana iinkcukacha ngokuthe ngqo kwizinto ezifunyenwe ngqo.
Ndandisoloko ndifuna ukwazi ngokuchaneka idatha ebonelelwe nguGoogle. Babe Iziganeko ezibini zokusetyenziswa endizicingayo:
• Ukuyila / ukuqulunqwa kwangaphambili kwintshaUya kuhlulwa.
• Ukufikeleleka kwipropati yebhasi ukuya uhlalutyo lwezikhukhula I-HEC-RAS 2
Inqaku elincamisayo nguNicolas Mangon, malunga nokuxhamla kwe-BIM esebenzayo kumxholo we-AEC.
Xa ubonisa indlela oku kuhlanganiswa ngayo, kwisigaba ngasinye kwisakhiwo sokwakha kuphucula ukusebenza, ukhuseleko kunye neendleko, Akuyi kuba ngumbuzo nokuba ngaba ishishini iya kuhamba kule ndlela, kodwa ngokukhawuleza.
Kwisakhelo sale mxholo, iphephancwadi liquka iindaba ezivela kwiinkampani ezihamba phambili kwishishini; AutoDesk, iBentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, iKadaster, Hexagon kunye neMicrosoft.
Siyakumema ukuba wonwabele la maphepha angama-60 okufunda, ngelixa ushicilelo olulandelayo lusenziwa. Okwangoku, iphephancwadi linikezelwa kwifomathi yedijithali, ngokusebenzisa ukushicilelwa nokuthunyelwa kwemfuno okanye kwifomathi yomzimba kwiimbasa apho abadlali balo bathatha inxaxheba.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-BIM Summit 2019
Post Next Iindaba zetekhnoloji kwiGeo-engineering-kaJuni 2019Okulandelayo »